जति लागे पनि शव जलाई दिनुहोस् ! « Janata Samachar
प्रकाशित मिति : जेठ १०, २०७८ सोमबार
मृतक रामलालका भाइले अनुरोध गरे, हाम्रो गुनासो छैन २८ हजार लिनु र कार्य सम्पन्न गर्दिनुहोस्, शव जलाउने काम गर्दिनुहोस् । दाउरा, घ्यू , जऊ, तिल, पण्डित आदि आदि म कहाँ खोजु ?
अहिले दैनिक कोभिड़का कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या अपत्यारिलो छ । अस्पतालमा उपचार गराउदा गराउदै ज्यान गएपछि त्यसको व्यवस्थापनको समस्या अर्को छ । कति बिमारी त मृत्यु पश्चात आफ्नो दाह संस्कार कसरी हुन्छ भन्ने चिन्ताले अस्पतालको बेडमा नै थप प्रभावित हुन्छन् ।
बिरामीका कैयन् आफन्तले बिरामीको अन्तिम अवस्था भन्दै उपचार गर्दागर्दै बीचैमा घर फर्काउने गर्छन् । अत्याधिकले अस्पतालमा प्राण त्याग्छन् । त्यसपछि बाहिरवाट उपचार गराउन आएका आफन्तको हरिबिजोग शुरु हुन्छ । बिरामी कुरुवासँग थोरै जना मात्र आफन्त हुन्छन् । चिनेकाजानेका पनि टाढैवाट समवेदना व्यक्त गर्दछन् Ι धेरैले फोनवाट मात्र समवेदना दिन्छन् । सैनिक आउँछ । शव लान्छ । कहाँ लान्छ ? कसरी अन्तिम कार्य गर्छ ? बाच्नेका मनमा यिनै प्रश्नहरु आइरहन्छन् । यधपी अहिले सरकारले शव व्यवस्थापन आफन्तको इच्छा अनुसार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर इच्छा अनुसार कार्य गर्न व्यवहारमा कठिन छ ।
बुटवलका लक्ष्मण श्रेष्ठको शव व्यवस्थापन गर्नु पर्यो । रू २८ हजार खर्च लाग्ने भयो । चितवन मेडिकल कलेजवाट लगभग ३ किलोमिटर वागेश्वरी घाटमा पुराएर परम्परा अनुसार सम्पन्न भयो । मृतकका आफन्तले केही गर्नु परेन । दागबत्ति मात्र दिने कार्य भयो ।
अर्को दिन जेष्ठ २ गते तिलोत्तमाका रामलाल भण्डारीको पनि शव व्यवस्थापन गर्नु पर्यो । उहाँ मेरा नजिकका परिचित हुनुहुन्थ्यो । यो पंक्तिकार पनि केही दिनदेखि आफन्तलाई उपचार गराउन पुरानो चितवन मेडिकल अस्पतालमा थिएँ । सुर्यबहादुर कुमालसँग सम्पर्क भयो Ι उनले शव व्यवस्थापन गर्दा रहेछन् । उनका कारिन्दा भाइले गुनासो गरे कि कसैले अत्यधिक मूल्य भयो भनेर प्रशासनमा गुनासो गर्नु भएछ त्यसैले म बाहनबाट शव मात्र पुर्याइ दिन्छु अरु व्यवस्था स्वयं गर्नुहोस् । मृतक रामलालका भाइले अनुरोध गरे, हाम्रो गुनासो छैन २८ हजार लिनु र कार्य सम्पन्न गर्दिनुहोस्, शव जलाउने काम गर्दिनुहोस् । दाउरा, घ्यू , जऊ, तिल, पण्डित आदि आदि म कहाँ खोजु ?
बिरामी कुर्दाकुर्दै हत्तु परेकाहरुलाइ उम्किन पाए हुन्छ भन्ने नै हुन्छ । अस्पतालको प्रक्रिया, अस्पतालको बाँकी भुक्तानी नभए शव लिन नपाइने कठिनाइ आदि कार्यमा घन्टौ बित्छ । समयको अभाव हुन्छ । बाहिरबाट आएकालाई जति सक्यो काम चाँडो सकेर घरका अन्य परिवारसँग फर्किन पाए भन्ने हुन्छ ।
चितवन बाहिरका अत्यधिक कोभिड प्रभावित क्षेत्र विशेष पश्चिम क्षेत्रका दर्जनौँ बिरामी उपचारका लागि भरतपुरका निजी मेडिकल कलेजहरु र सरकारी अस्पतालमा भर्ना छन् । वास्तवमा एकातर्फ निजी अस्पतालको महँगो लाखौको खर्चले थालिएकालाई बिरामी गुमाउदाको पीडासँगै शव व्यवस्थापनको यो खर्चले झनै विवश बनाएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । सरकारले बेड सुबिधा नि:शुल्क हुन्छ भने पनि त्यसको कतै कसैले उचाहर्ण गरेको पाइदैन ।
कोभिडको बिरामीका कुरुवाहरुसँग आफन्तको उपस्थितिको अभाव हुन्छ । आफन्तहरुलाई चाहेर पनि घटनास्थलमा बोलाउन सकिदैन । आफन्तहरु चाहेर पनि पुग्न सक्दैनन् । समयको अभाव, संक्रमणको डर, यातायातको असुविधा, निषेधाज्ञा थुप्रै अप्ठ्यारा रहेका हुन्छन् । बुटवलका लक्ष्मणको शव व्यवस्थापनका निम्ति उहाँका छिमेकी आफन्त आउन खोज्दा पनि चितवन पुग्न कठिन भयो ।
सैनिकले शव लगेर मुख पनि हेर्न पाइँदैन कि भन्ने मानसिकतावाट गुज्रिरहेका आफन्तहरुलाई आफ्नो अगाडी शव अग्निमा जलेको देखेर अस्तु लिन पाउँदा त्यो व्यवस्थाको सुविधाले चितवनमा २८ हजार वा अन्यत्र कमबेसी जे भए पनि धेरै शुल्क लाग्दा पनि ठिकै भयो भन्नेहरु भेटिन्छन् । वास्तवमा यो परिवारजनको बाध्यात्मक अवस्था नै हो ।
यसलाई सम्बन्धित निकायले छलफल गरेर कम पनि गराउन सकिन्थ्यो होला तर त्यतातिर ध्यान जान सकेन । जहिले पनि राज्य यस्तै-यस्तै सासाना घटनाहरुमा चुकेको हुन्छ । यसको कारण हो जिम्वेवार निकायले गहन भएर छलफल गर्न नसक्नु । कुनै घटनाले कुन कुन ठाउँमा प्रभाव पार्छ र त्यसको प्रभावकारिता कहाँ हुन्छ भनेर यकिन गर्न नसक्नु ।
माथिका २ घटनालाई व्यवस्थापन गर्नमा यो पंक्तिकारलाई चितवनका समाज सेवी रामप्रसाद भट्टले सहयोग गरेका थिए । म जस्ता सहयोग लिन खोज्ने र उनले सहयोग गर्नु पर्ने दर्जनौँ बिरामीलाई सहयोग पनि गरेका छन् । लायन्सका जिम्मेवार लिडर भएकाले पनि देश भरिका बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नेदेखि अस्पतालवाट बाहिर लैजाँदा सम्मको घटनालाई व्यक्तिगत रुपमा भट्टले रामरी बुझ्नु भएको रहेछ ।
वास्तवमा शव व्यवस्थापन नि:शुल्क वा कम खर्चमा हुनुपर्छ । सायद त्यसैले होला रामप्रसादको पहलमा लायन्स चितवन क्षेत्रले १ थान शव बोक्न बाहन सैनिकलाई हस्तान्तरण पनि गर्यो । अन्य ५०औँ लाख पर्ने उपकरणहरु पनि अस्पताललाई प्रदान गरेको छ । शव व्यवस्थापनमा दाउरा स्थानीय निकाय भरतपुर नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने छ । यसरी बाहन र दाउराको खर्च कम हुँदा आफन्तलाई धेरै राहत अवश्य मिल्ने छ । तर शव व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक अन्य जलाउने व्यवस्था सशुल्क भए पनि आफन्तको चित्त बुझ्ने गरी हुनु जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा यस प्रकारको काम शुल्क लिएर गरे पनि समाज सेवा नै मान्न सकिन्छ भन्दा फरक नपर्ला । यो सुविधा चितवनमा हुनेछ भनेर सामाजिक अभियान्ता लायन्सका नेता रामप्रसाद भट्टले जानकारी पनि गराउनु भएको छ । यस्तै सुविधा अन्यत्र पनि हुनुपर्छ भन्ने मेराे बुझाइ छ ।
सरकारसँग सहकार्यमा सैनिक, शुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, लायन्स, रोटरी लगायत अन्य स्थानीय संस्थाहरु देशै भरी सक्रिय छन् Ι कहीँ वाँचेकालाई भोजन वितरण गरिरहेका छन् त कतै ज्यान गुमाएकालाई सहज व्यवस्थापन गर्न लागि परेका छन् । यी सबै साधुवादका पात्र हुन् । जोखिम उठाउँदै सबैको मङ्गल होस् भनि रहेका छन् ।